မသိဘူးကွာ နေဦး စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ် အချိန်ပေးဦး ခဏ ၂ ရက် ၃ ရက်ပေါ့ကွယ် ငှဲငှဲ ဟားဟားးးးးးးး
(တကယ်တော့ တခြားသူတွေဖြေတာကြည့်ဝါးချမလို့ လှည့်ပြန်သွားတာပါ :P)
ခေါင်းကို ဘယ်ပြန်ညာပြန် ၃ ခါလောက် ကုတ်နေမိတယ်။
အဖြေလည်းထွက်လာဘူး....။ တောက်တီးတောက်တဲ့တော် မေးလည်းမေးတတ်တယ်
နံပါတ် ၂ က ဗျည်း ၃၃ လုံးထဲမှာ မပါ ပါဘူးဆိုမှတော့ အဖြေကို ဘယ်နား သွားရှာရပါ့မလဲ။
ခေါင်း တကုတ်ကုတ်နဲ့ ပြန်သွားပြီ .....။
(၁) မြစ်ကြီးနား (ဧရာဝတီမြစ်ကြီးနားမှာရှိတယ်)
(၂) အင်းလေး (အင်း ၂အင်းရှိတဲ့ထဲမှာ သူက သေးလို့ ..ပြီးမြို့ တည်ထားတယ်လေ)
မသိပါ...ရှိပါဘူးဆို ဘယ် အဘိဓာန်သွားရှာရမတုန်းအစ်ကိုရ.. ဗြဲဗြဲ
အပေါက်သေးသေးဆိုတာ ဘယ်လိုသေးသေးလဲ။ ဟဲဟဲ မသေချာတော့ သေးတာထက် နဲနဲ ပိုကြီးသွားလို့ ...အချိန်နဲနဲ လွဲသွားပါတယ်။ အဲတာကြောင့် ဦးစဆီမှာ ကလော်တုတ်ခံရတာ...
ကဲ ဟိဟိ :P
မြန်မြန် အဖြေပေးပါဗျို့ ...
၁။ နာမည်လိုက်တဲ့ မြို့ကြီး နှစ်မြို့က
မြစ်ကြီးနားမြို့က ဧရာဝတီမြစ်ကြီးရဲ့ အနားမှာ တည်ထားတယ်။
(ရေနံချောင်းမြို့ကိုလဲ နာမည်နှင့်လိုက်တယ်ပြောလို့ရပါတယ်။ ရေနံချောင်းမြို့တစ်လျောက် ရေနံတွေ မြေအောက်မှာ ချောင်းတွေလို ဖြစ်နေလို့။ ဒါပေမဲ့ ရေနံချောင်းက မြို့ကြီးမဟုတ်ဘူး).
၂။ မြန်မာဗျည်း ၃၃ လုံးထဲမှာ ပျောက်နေတာက က လေး အက္ခရာဘဲ။ ရှင်းပြပါမည်။
ဗျည်း ၃၃ လုံးထဲမှာ...
ဃ ကြီး ရှိသလို ဂ ငယ် ရှိတယ်။
ဏ ကြီး ရှိသလို န ငယ် ရှိတယ်။
ဠ ကြီးရှိသလို လ လေးရှိတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကကြီးရှိသလို က လေး(ငယ်) မရှိဘူး။
၃။ ဖြစ်နိုင်ချေနှစ်ခု ရှိပါတယ်။
ပထမတစ်ခုက မြ၀တီမင်းကြီးဦးစဟာ ပတ်ပျိုးရေးတဲ့နေရာမှာ တကယ်တော်တယ်။ အချိန်အတိအကျနဲ့ ရေးနိုင်ပုံရတယ်။ ဥပမာ စရေးတဲ့အချိန်ကစပြီး ပြီးတဲ့အချိန်အထိ တစ်နာရီကွက်ဖြစ်နေနိုင်တယ်။ (ကျနော့်အထင်ပါ)။
အဲဒီတော့ သူ ပတ်ပျိုးတစ်ပုဒ်ပြီးပြီးချင်း နာရီမောင်းသံမကြားရလို့ အချိန်လွဲတယ်ဆိုပြီး နာရီမောင်းတီးတဲ့သူကို ကလော်ဆဲတာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
မြ၀တီမင်းကြီးဆီမှာလဲ နာရီစည်းချက်ပြုလုပ်တဲ့ ရေခွက်စံချိန်ရှိမယ်။ နာရီမောင်းတီးတဲ့သူဆီမှာလဲ ရှိမယ်။ ဒါပေမဲ့ကွာခြားချက်က မြ၀တီမင်းကြီးရဲ့  ရေခွက်ထဲက ရေတွေက ရေကောင်းရေသန့်တွေဖြစ်နိုင်တယ်။ ဒါကြောင့် အချိန် တိကျမယ်။ နာရီမောင်းတီးတဲ့သူဆီက ရေကတော့ အများသုံးမို့ ရေမသန့်ဘဲ ရေထဲမှာ အနယ်တွေ ရှိနိုင်တယ်။
ဒီတော့ ဖလားခွက်သေးသေးလေးထဲကို ရေစိမ့်ဝင်တဲ့အပေါက်ထဲ ရေထဲက အနယ်လေးတွေ ပိတ်ဆို့နေတာကြောင့် ရေအ၀င်မညီဖြစ်ပြီး အချိန်လွဲသွားတာလဲ ဖြစ်နိုင်တယ်။
ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူး။ ကျနော်လဲ ရမ်းချလိုက်တာ။
ဟဲ ဟဲ ..ဟဲ ဟဲ ။
အပေါ်က ဦးကိုကိုမောင် ယူကေ ကြီးက
ပညာရှိကြီး ပါလား ။
သူဖြေလိုက်ပြီးပြီ ၊ နောက်လူတွေ ဖြေစရာ လိုတော့ ဘူး ...
အဲဒီ ကိုကိုမောင် ဖြေသလိုပဲ လို့ လာပြောတာ အဟီးးးး ငါကွ တော်တယ်မလား ဟက်
၁။ ကမမမေသူနဲ့ တူနေပါတယ်.. နောက်တစ်ခုက တောင်ငူလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်
၂ နဲ့၃ ကတော့ တိဝူးဂျာ စဉ်းစားလိုက်ဦးမယ် ပြီးရင် ပြန်လာရေးမယ် ဟီးးး
ခုတော့နောက်ကျမှရောက်လာလို့ ဖြေစရာမလိုတော့ဘူး လေ မောင်လေးကိုကိုမောင် ပညာရှိကဖြေသွားပြီ။
တောက်! ကိုကိုမောင် ဦးသွားလို့ပေါ့ကွာ ဟင်းးးဟင်းးး
ငါကိုက ရောက်လာတာ နောက်ကျတာပါ
ခေါင်းခါ လည်ခါဖြင့် ပြန်သွားရသည်။